မင်းအတွက် ဆေးတစ်ခွက် [System] - အပိုင်း (၂၁) ထုံးထျန်းမျက်လုံး - Wattpad
732 211 1
ကုကျိုးသည် မျိုးနွယ်စုအိမ်တော်သခင်လေး(၅)ဦး၏ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်များကို မြင်ရမည့် အရေးတွေးပြီး အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကာ စိတ်လှုပ်ရှား​မိသည်။
သူတို့အားလုံးက မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ထဲမှာ အတော်ဆုံးနဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး​လေ။ သူတို့ထဲကနေ နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူက အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ?
ထို့နောက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်အချိန်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ မျိုးနွယ်စုအိမ်တော်ကြီး(၅)ခုမှ အကြီးအကဲများနှင့် နန်းတော်၏ နန်းမြင့်မျှော်စင်ထက်မှ တော်ဝင်မိသားစုဝင်များသည်လည်း လာမည့်ပြိုင်ပွဲအပေါ် အထူးတလည် အာရုံစိုက်လာကြသည်။
ဤမျိုးဆက်၏ စွမ်းအားကြီးမားသူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ယခင်မျိုးဆက်များထက် များစွာ ပိုမို၍ သာလွန်ထူးချွန်ကြသည်။
ယခင် အင်ပါယာသခင်လေးများသည် အသက်(၂၀)အရွယ်ခန့်တွင် ချီသွေးကြောငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းအဆင့်ကို ရောက်သည်ဆိုရုံမျှသာရှိကြသည်။ သို့သော် ယခုမျိုးဆက်၏ သခင်လေးများကတော့ ဟို့ထျန်းအဆင့် (၉)၊ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ထားပြီဖြစ်သည်! ၄င်းတို့အနေဖြင့် ရှန်းထျန်းအဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် ခြေတစ်လှမ်းသာလိုပြီး ထိုအခါ အင်ပါယာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့် သိုင်းပညာရှင်များကြားတွင် အားလုံး၏ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်!
လူငယ်များသည် အနှိုင်းမဲ့အလားအလာကောင်းများနှင့် ပြည့်စုံကြပေသည်။
ထိုနည်းတူ ဤကဲ့သို့ ပါရမီရှိသော လူငယ်များစွာပေါ်ထွန်းလာခြင်းက ထျန်းဝူတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိ ပါရမီရှင်များနှင့် ပေါင်းစည်းလိုက်လျှင် လက်ဖျားခါလောက်အောင် အင်အားကြီးမားသည့်ခေတ်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ နဂါးတို့၏တိုက်ပွဲ၊ ကျားတို့၏စစ်မြေ​ပြင်ကဲ့သို့ အင်အားကြီးမားသူများအကြားတွင် များစွာသော ထူးခြားပြင်းထန်သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများပေါ်ပေါက်လာကာ ဤတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် နှစ်များစွာသို့ ရောက်ရှိလာမည်မှာမလွဲဧကန်​ပင်!